भरतपुरका विद्रोही उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलका पक्षमा कति छन् नेता ? « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
भरतपुरका विद्रोही उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलका पक्षमा कति छन् नेता ?
चितवनबाट कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य रहेका पाँच र जिल्ला सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका पाँच नेतामध्ये कोही पनि छैनन् पौडेलको पक्षमा
भरतपुरका विद्रोही उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलका पक्षमा कांग्रेसका कति नेता–कार्यकर्ता छन् र उनीहरूमध्ये अन्तिमसम्म कति उभिन्छन् ? मतदाता, विश्लेषक र मिडियाको सर्वाधिक चासो छ । चितवनबाट टेकप्रसाद गुरुङ, उमेश श्रेष्ठ, अञ्जनी श्रेष्ठ, दिनेश कोइराला र शान्ति परियार विक गरी पाँचजना कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य छन् । उनीहरूमध्ये कोही पनि पौडेलको पक्षमा छैनन् । सुरुमा माओवादीलाई मेयर दिन नहुने मत राखेका केन्द्रीय सदस्यद्वय गुरुङ र कोइराला पनि पछिल्लो समय गठबन्धनका चुनावी सभामा पुगेर रेनुलाई भोट मागिरहेका छन् ।
त्यस्तै, चितवन कांग्रेसको सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका पाँच नेता पनि पौडेलको पक्षमा छैनन् । उनीहरू सबै गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मत मागिरहेका छन् । चितवन कांग्रेसको अधिवेशनमा राजेश्वर खनाल, मिलनबाबु श्रेष्ठ, उत्तम जोशी, प्रा.डा. सूर्यकान्त घिमिरे र कैलाश कोइरालाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । पहिलो चरणमा कुनै पनि उम्मेदवारले ५० प्रतिशत मत कटाउन नसकेपछि राजेश्वर खनाल र मिलनबाबु श्रेष्ठबीच दोस्रो चरणको निर्वाचन तय भएको थियो ।
तर, मतदानमा जानुअघि श्रेष्ठले समर्थन गरेपछि खनाल निर्विरोध अध्यक्ष चुनिएका थिए । अहिले विद्रोही उम्मेदवार बनेका पौडेल पनि जिल्ला सभापति बन्ने दौडमा थिए, तर उनी महाधिवेशन प्रतिनिधिमै हारेपछि अगाडिको यात्रा रोकिएको थियो । बिहीबार भरतपुरमा भएको पाँचदलीय गठबन्धनको चुनावी सभापछि कांग्रेसका असन्तुष्ट नेता–कार्यकर्ता गठबन्धनप्रति जवाफदेही हुन थालेका छन् । सुरुमा पौडेलको पक्षमा उभिएका केही नेता–कार्यकर्ता अहिले गठबन्धनका उम्मेदवारको पक्षमा मत माग्न थालेका छन् ।
भरतपुर महानगरका सम्भावित परिदृश्य
१. राजनीतिक समीकरणसँगै भरतपुरको निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने एउटा कारण यहाँ बढेको मतदाताको संख्या पनि हो । गएको निर्वाचनमा मतदाता संख्या एक लाख ५० हजार २७४ थियो । यसपटक एक लाख ८५ हजार ७५२ पुगेको छ । पुरुष मतदाताको संख्या ८८ हजार ८८४ र महिलाको संख्या ९६ हजार ८६७ छ ।
२. भरतपुर क्षेत्रमा अन्यत्रबाट बसाइँ सरेर आउने जनसंख्यासँगै नयाँ पुस्ताले कसले जित्छ भन्ने निर्णय गर्न सक्छन् । अहिले विगतको एमाले टुक्रिएको छ । एमालेबाट विजयी बनेका महानगरपालिकाका ७, ९, १०, १२ र २२ का वडाध्यक्ष एकीकृत समाजवादीमा छन् । यद्यपि, माओवादीका केही नेता एमाले प्रवेश गरेका छन् । रामबहादुर थापा चितवनकै भएकाले समाजवादीमा गएको मतभन्दा माओवादीबाट एमालेमा आएको मत धेरै रहेको एमालेको दाबी छ ।
३. भरतपुर प्रचण्डको गृहनगर मात्र नभई पूर्वमन्त्री एवं राप्रपाका उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेको आधार क्षेत्रसमेत हो । भरतपुरको मेघौली क्षेत्रका केही वडामा राप्रपाको मत राम्रै छ । त्यही कारण ०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले चितवन ३ मा प्रचण्डविरुद्ध पाण्डेलाई सहयोग गरेको थियो । राप्रपाबाट ०७४ को निर्वाचनमा मेयरमा उम्मेदवारी दिएका बद्री तिमिल्सिना अहिले माओवादीमा छन् । उनी भूमि आयोग चितवनका अध्यक्ष पनि हुन् । उनले पनि केही मत प्रभावित बनाउन सक्ने आकलन छ ।
मेयरका थप उम्मेदवार : प्रवीण काफ्ले (विवेकशील साझा), गणेश गिरी (लोसपा), लक्ष्मण अधिकारी (राप्रपा नेपाल), हरिप्रसाद दुवाल (नेमकिपा), सूर्यप्रसाद रेग्मी (माले), ज्ञानबहादुर गुरुङ (जनमुक्ति), टेकबहादुर पुनमगर (मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन), पूर्णबहादुर गुरुङ (नागरिक पार्टी), सञ्जयकुमार ठाकुर (जनमत), विनोदकुमार गिरी (मौलिक जरोकिलो), दीपेन्द्र बास्तोला (उन्नत लोकतन्त्र), सुरेन्द्र परिवार (माओवादी समाजवादी), खेम प्रसाईं (सामाजिक एकता) । स्वतन्त्र उम्मेदवार : जगन्नाथ पौडेल, उद्धव अर्याल, रामकृष्ण ओझा, मोहित पाण्डे, कुलराज कँडेल, सुमन अधिकारी, योगलाल श्रेष्ठ, यमकान्त शर्मा कँडेल, हरिशरण श्रेष्ठ, रमेश भण्डारी, मिलन अधिकारी र हरिश्चन्द्र घिमिरे । नयाँ पत्रिकाबाट
प्रकाशित मिति : बैशाख २७, २०७९ मंगलबार ९ : २९ बजे